Vacuum yekuchenesa pole gutter telescopic yekuchenesa pole
Iyo pole inogona kukubatsira iwe kusvika kune akaomesesa migero kuchenesa. Yedu yekuchenesa matanda anoshanduka-shanduka uye haana kuganhurirwa kune yekuchenesa yekuchenesa. Ingochinja bhurasho musoro, tinogona kuchenesa hwindo 85 tsoka kumusoro kwepasi.
Plain 3K Carbon Fibhi Tube YeGutter Kuchenesa Ngura Kuramba
Isu tine gutter yekuchenesa pole zvigadzirwa zveakasiyana maficha uye tinobvuma kugadzirisa.
Iyo pole inogona kukubatsira iwe kusvika kune yakanyanya kuomesa kuchenesa gutter, kubva kumafurati madiki kusvika kumabhizimusi makuru.
Washington City Offices Gutter Vacuum 15ft Mvura Fed Window Kuchenesa Pole
Fiberglass matanda akareruka uremu, zvichiita kuti kuiswa kuve nyore uye hakuzokwezva mheni kana kuitisa magetsi.
30mm gutter yekuchenesa pole, Yakawedzera Yakareba Window Kuchenesa Pole
Isu tine gadzi yekuchenesa matanda zvigadzirwa zvemamita akasiyana uye tinobvuma kugadzirisa. Iyo pole inogona kukubatsira iwe kusvika kune yakanyanya kuomesa kuchenesa gutter, kubva kumafurati madiki kusvika kumabhizimusi makuru. Tinogona kuchenesa gutter kana denga kusvika pamamita 85 pamusoro pevhu.
25Ft gutter yekuchenesa pole hwindo telescopic yekuchenesa pole
Isu tine gutter yekuchenesa pole zvigadzirwa zvehurefu hwakasiyana uye tinobvuma kugadzirisa. Iyo pole inogona kukubatsira iwe kusvika kune yakanyanya kuomesa kuchenesa gutter, kubva kumafurati madiki kusvika kumabhizimusi makuru.